gtalk ​တွင် zaw gyi font ​မ​ပေါ်​ခြင်း ​ပြ​ဿ​နာ​အ​ဖြစ်​အ​များ​ဆုံး​က IE ​က ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​အစ်​ကို့​အ​ထင်​တော့ ​ညီ​မ​က internet explorer ​ကို ​သွား​သုံး​နေ​တယ်​ထင်​တယ်. ​ကို​ပြော​ပြ​လိုက်​တဲ့ ​အ​ချက်​တွေ​ကို​သာ ​ပြင်​လိုက်​ပါ . ​ညီ​မ ​အ​ဆင်​ပြေ​သွား​ပါ​လိမ့်​မယ်. ​အဲ့​ဒီ့ ​ပြ​ဿ​နာ​အ​ဖြစ်​အ​များ​ဆုံး​က​တော့ IE ​လို့​ခေါ်​တဲ့ internet explorer ​က​နေ Times New Roman (or) ​တစ်​ခြား font ​တစ်​ခု​ခု​ကို ​ရွေး​ထား​ပြီး browser ​ကို Default ​ယူ​ထား​လို့ ​ဖြစ်​တဲ့ ​ပြ​ဿ​နာ​ပါ. ​အဲ့​ဒီ့​အ​တွက်​ကြောင့် ​ကျွန်​တော်​တို့​အ​နေ​နဲ့ Mozilla Firefox ​ကို Default browser ​အ​ဖြစ် ​ပြန်​ယူ​လိုက်​ရင် ​အ​ဆင်​ပြေ​သွား​မှာ​ပါ. ​အဲ့​တော့ ​တစ်​ခါ​တစ်​ရံ​မှာ Firefox ​ကို ​တင်​လိုက်​တဲ့​အ​ချိန်​တုန်း​က Mozilla Firefox browser ​ကို default ​ထား​မှာ​လား​မေး​တုန်း​က default ​မ​ထား​ခဲ့​လို့​လဲ​ဖြစ်​တတ်​ပါ​တယ်. ​တစ်​ခါ​တစ်​ရံ default ​ထား​ထား​တာ​တောင်​မှ IE ​နဲ့ gtalk ​နဲ့ ​လာ​ငြိ​တတ်​ပါ​တယ်. ​ကဲ​လုပ်​ရ​မှာ​လေး​ကို ​ပြော​ပြ​ပေး​ပါ့​မယ်.
​သေ​ချာ​သွား​အောင်​လို့ ၃ ​နေ​ရာ​ပြင်​ပါ​မယ်.
၁။ Internet explorer (IE) ​ကို​ဖွင့်​လိုက်​ပါ
Tools ​ထဲ​က Internet options ​ဆို​တာ​ကို ​ရွေး​ပေး​လိုက်​ပါ.
​ပြီး​တာ​နဲ့ ​အောက်​ဆုံး​က Appearance ​ရဲ့​အောက်​က Colors ၊ Languages ၊ Fonts ၊ Accessibility ​ဆို​တဲ့​အ​ထဲ​က Fonts ​ဆို​တဲ့ ​အ​ကွက်​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ။ ​ပြီး​ရင် Webpage font: ​အ​ကွက်​မှာ ​အောက်​ဆုံး​အ​ထိ ​ဆွဲ​ချ​လိုက်​ပြီး Zawgyi-One ​ဆို​တာ​ကို ​တွေ့​အောင်​ရှာ​ပြီး ​ရွေး​ပေး​လိုက်​ပါ.
​ပြီး​ရင်​တော့ OK ​ပေါ့.
၂။ Mozilla Firefox ​ကို ​ဖွင့်​လိုက်​ပါ။
Menu bar ​မှာ​ရှိ​တဲ့ Tools >> Options ​ကို​သွား​လိုက်​ပါ.
Options box ​ထဲ​က Content ​ကို​ရွေး​ပြီး​နှိပ်​လိုက်​ပြီး Default font ​မှာ Zawgyi-One ​ပြောင်း​ပေး​လိုက်​ပါ။
​ပြီး​ရင်​တော့ Ok ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ။
၃။ ​ဒါ​က​တော့ ​နောက်​ဆုံး​အ​ဆင့်​ပါ။ Gtalk ​ကို​ဖွင့်​ပါ။
​ထိပ်​ဆုံး​က Settings ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ. ​ပြီး​ရင် ​ညာ​ဖက်​က ​အ​လယ်​လောက်​မှာ​ရှိ​တဲ့ Change Font ​ဆို​တာ​ကို​နှိပ်​ပါ။
​အဲ့​မှာ​လည်း​ပဲ Zawgyi-One ​ပြောင်း​ပေး​လိုက်​ပါ။
​ကဲ ​ဒီ​သုံး​ခု​ပြီး​ရင်​တော့ ​အား​လုံး​အို​ကေ​သွား​ပါ​ပြီ . ​အ​ဆင်​မ​ပြေ​တာ​များ​ရှိ​ရင် ​ကွန်​မန့်​ရေး​ပေး​နိုင်​ပါ​တယ်. ​အ​ဓိ​က​က​တော့ IE ​မှာ Zawgyi-One font ​ရွေး​ပေး​ဖို့​ပါ​ပဲ. ​အ​များ​ဆုံး​အ​ဖြစ်​များ​တာ​က IE ​နဲ့ ​ငြိ​တတ်​တာ​များ​ပါ​တယ်. ​အား​လုံး​ပဲ ​အ​ဆင်​ပြေ​လိမ့်​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်. zawgyi font ​နဲ့ keyboard ​ကို​တော့ ​ကျွန်​တော့်​ဆိုက်​ရဲ့ ​ညာ​ဖက်​အ​ခြမ်း​မှာ ​တင်​ထား​ပေး​ပါ​တယ်. ​မ​သိ​တဲ့​သူ​များ ​ကို​တင်​ထား​တဲ့ window ​က 32 bit ​လား 64 bit ​လား ​အ​ရင်​ကြည့်​ပါ. 32 bit ​ဆို​ရင် ​ဒီ​မှာ Download ​လုပ်​ပါ. 64 bit ​ဆို​ရင်​တော့ ​ဒီ​မှာ Download ​လုပ်​ပါ။ ​တစ်​ချို့ ​ကို​တင်​ထား​တဲ့ window ​က 32 bit ​လား 64 bit ​လား ​မ​ခွဲ​တတ်​တဲ့​သူ​များ​က​တော့ Desktop ​က My computer (or) Computer ​ကို right click ​ထောက်​ပြီး properties ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ။ ​အဲ့​မှာ System ​ဆို​တဲ့​စာ​တမ်း​အောက်​မှာ system type ​ဆို​တာ​ကို ​လိုက်​ရှာ​လိုက်​ပါ. ​သူ့​ဘေး​မှာ 32 bit ​ဆို​ရင် 32 bit operation system ​လို့​ရေး​ထား​မှာ​ဖြစ်​ပြီး 64 bit ​ဆို​ရင်​တော့ 64 bit operation system ​လို့​ရေး​ထား​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်.
than hla February 5, 2012 at 11:18 AM
i cannot use gtalk typing myanmar font fro window7home premiun 64bit fri.how to install myanmar font pls explaine me.thanks
D van hnin February 10, 2012 at 10:17 PM
koyin February 12, 2012 at 1:00 PM
​ဟုတ်... ​အဲ​ဒီ​ပြ​ဿ​နာ​ကို ​ကျ​နော် ​ငါး​လ​လောက် ​ကြုံ​လိုက်​ရ​ပါ​တယ်... ​လိုက်​မေး​တာ​လည်း ​စုံ​နေ​ပီ.. ​ဘယ်​သူ​မှ ​မ​သိ​ကြ​ဘူး.. ​ပ​ထ​မ ​စ​ဒေါင်း​တာ​က ​အိုင်​အီး​နဲ့​ပါ... ​နောက်​ပိုင်း ​အိုင်​အီး​မ​သုံး​တော့​ဘဲ ​မော်​ဇီ​လာ ​သုံး​ပါ​တယ်... ​ဘယ်​အ​ချိန်​က ​စ​ပီး ​ဇော်​ဂျီ​မ​ပေါ်​တော့​တာ​လည်း ​မ​သိ​ဘူး.. ​စာ​ရိုက်​ရင် ​ရ​တယ်... ​ဘောက်စ်​ထဲ​မှာ​ဆို ​သူ​ပို့​တာ​ရော ​ကိုယ်​ရိုက်​တာ​ရော ​မြန်​မာ​လို​ပေါ်​ပီး ​ဖတ်​မ​ရ​ဘူး... ​အဲ​လို ​ဖြစ်​တာ
​ပီး​ခဲ့​တဲ့​လ​က​မှ ​မော်​ဇီ​လာ ​ဟန်း​သွား​လို့ ​ဖြုတ်​လိုက်​ပီး ​လိုက်​က​လိ​ကြည့်​တာ ​ဘယ်​ဟာ ​မှန်​သွား​လည်း​တော့ ​မ​သိ​ဘူး.. ​ဂျီ​တော့ ​ပြန်​သုံး​လို့ ​ရ​သွား​တယ်... ​ဒီ​ပို့စ်​ကို ​ခု​မှ​ဖတ်​ဖြစ်​တယ်.. ​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ် ​ကို​ညီ... ​နောက်​လည်း ​အ​များ​ကြီး ​ဝေ​မျှ​အ​ကျိုး​ပြု​နိုင်​ပါ​စေ...
. February 14, 2012 at 12:16 PM
​မန်း​သား February 18, 2012 at 9:27 PM
Yeah!! it works. Thank you SO much. Again thank you.
tun February 21, 2012 at 12:49 AM
kyaw minn htun March 5, 2012 at 8:30 PM
kyaw minn htun March 5, 2012 at 8:31 PM
myatthu March 11, 2012 at 8:09 PM
​ကျေး​ဇူး​ပါ ​ခု​မှ​ပဲ​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ​တော့​တယ် ​မေးလ်​ထဲ​မှာ​တော့ ​ဖတ်​လို့​ရော ​ရေး​လိုt့​ရော ​ရ​ပေ​မယ့် g talk ​မှာ​တော့ ​အ​ခု ​ပြော​တဲ့​အ​တိုင်း​လိုက်​လုပ်​လိုက်​မှ​ပဲ ​ရ​သွား​တော့​တယ် ... ​သူ့​တ​ပါး​အ​ခက်​အ​ခဲ​ကို ​ကူ​ညီ​မှု​ကြောင့် ​အ​မြဲ​တမ်း ​အ​ခက်​အ​ခဲ​ကင်း​ပါ​စေ...
​အာ​ကာ March 14, 2012 at 2:41 PM
thankalots bro
koko March 21, 2012 at 8:02 AM
koko March 21, 2012 at 8:04 AM
aungnaizaw May 1, 2012 at 10:38 PM
​ဆ​ရာ​ညီ​နေ​မင်း​လို့​ပဲ​ခေါ်​ချင်​ပါ​တယ်။​ဆ​ရာ ​ဆို​တဲ့​စ​ကား​လုံး​တွေ​နဲ့​ထိုက်​တန်​သူ​မို့ ​အ​မှန်​တ​ကယ်​လေး​စား​လွန်း​လို့​ခေါ်​တာ​ပါ။​ဆ​ရာ​ပြော​ထား​တဲ့​နည်း​သုံး​မျိုး​နဲ့ ​မ​ရ​ပါ​ဘူး​ဖြစ်​နေ​တယ်။​ထူး​ခြား​တာ​က IE ​ထဲ​က fonts ​ထဲ​မှာ zawgyi-one ​မ​ရှိ​ဘူး​ဖြစ်​နေ​တယ်။​ကျွမ်း​ကျင်​တဲ့​ဆ​ရာ​သ​မား​တွေ ​နဲ. ​ပြ​ကြည့်​တာ ​ဘာ​မှ​ထူး​ခြား​မ​လာ​လို့ ​ဆ​ရာ​ကို​အား​ကိုး​ပါ​တယ်။facebook ​ကြည့်​နေ​တဲ့​အ​ချိန်​မှာ​တော့ ​ဘောက်​က​အောက်​က​နေ​ပေါ်​တဲ့ ​အ​ခါ​မှာ​တော့ ​စာ​ပေါ်​ပါ​တယ်။​ဘောက်​ကို​ဖွင့်​ကြည့်​ရင်​မ​မြင်​ရ​တော့​ဘူး။​ဒီ​လို​ဖြစ်​နေ​တာ ​သုံး​လ​လောက်​ကြာ​နေ​ပြီ။​ကျေး​ဇူး​တင်​စွာ​နဲ့ ​ဆ​ရာ​ရဲ.​တ​ပည့်​သစ်​လေး
daddy guy May 2, 2012 at 8:34 PM
koko May 15, 2012 at 5:32 PM
thanks u too much.....
ko thet lwin May 27, 2012 at 1:03 AM
​ညီ​လေး​ရေ ​အစ်​ကို​ကြီး​က ​အ​ခု​မှ ​အင်​တာ​နက်​စ​သုံး​တာ​ပါ။ ​ငါ့​ညီ​လေး ​အောင်​မြင်​ပါ​စေ။
nay myo June 19, 2012 at 2:34 PM
aungphyooo June 24, 2012 at 4:50 PM
hi August 5, 2012 at 7:54 PM
​ကျ​နော်​လဲ ​လေး​ငါး​လ​လောက်​ရှိ​နေ​ပီ gtalk ​မှာ ​ရိုက်​လို့ ​ရ​ပီး ​မ​မြင်​ရ​တာ..​အဲ​ဒါ​ကြောင့် ​မေး​ထဲ​က​ပဲ​ချက်​နေ​ရ​တယ်..​ခု​တော့ ​အ​ဆင်​ပြေ​သွား​ပီး ​အ​များ​ကြီး​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ်..​ဒီ​ထက်​မ​က ​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ​စေ​လို့ ​ဆု​တောင့်း​ပေး​ပါ​တယ် ​အ​ကို
targyi zlo August 16, 2012 at 11:07 AM
targyi zlo August 16, 2012 at 11:10 AM
THEINKABAR August 19, 2012 at 9:34 PM
​ကျွန်​တော်​လည်း​အ​ဆင်​ပြေ​သွား​ပြီ ​အစ်​ကို​ရေ...... ​ကျေး​ဇူး​ပါ​ဘဲ​ဗျိူ. .......................
Ye Htet September 22, 2012 at 4:06 PM
Ye Htet September 22, 2012 at 4:23 PM
​ကျး​ဇူး​ပါ။ ​ဆ​ရာ​ညီ ​ကျန်း​မာ​ပါ​စေ ​ချမ်း​သာ​ပါ​စေ။ ​နည်း​ပ​ညာ​တွေ ​ဒီ​ထက်​မ​က ​ဖြန့်​ဖြူး​နိုင်​ပါ​စေ
khunthartoolay November 25, 2012 at 4:23 PM
​မျောက် December 18, 2012 at 7:10 PM
​အ​ကို ​ခင်​ဗျာ ​ကျွန်​တော် ​လည်း ​တစ်​ခါ​ဖြစ်​ဗူး​ပါ​တယ် ​သူ​က gtalk ​မှာ​ဖြစ်​တာ​ပါ ​မြန်​မာ​လို​လုံး​ဝ ​မ​ပေါ်​ဗူး ​ကျွန်​တော် ​လုပ်​ခဲ့​တာ​တွေ​ပြော​ပါ​မယ်
1. gtalk font setting ​ထဲ​က​နေ font ​ပြောင်း​တယ် ​မ​ရ​ဘူး
2. zawgyi-one font ​ကို install ​နောက်​တစ်​ကြိမ် ​ပြန်​လုပ်​တယ် ​မ​ရ​ဘူး
3. gtalk ​ကို ​နောက်​တစ်​မျိုး​ပြောင်း​ပီး install ​လုပ်​တယ် ​မ​ရ​ဘူး
​အ​ကို​ရယ် ​ပြော​ပါ​ဦး ​ခု​ကျွန်​တော် browser ​ထဲ​က​နေ​ပဲ gtalk ​သုံး​နေ​ရ​တယ်
​သား​ကြီး ​ကြီး February 12, 2013 at 6:50 PM
me myanmar font see not write wh do! ex:given bar say lay.
SiNistra April 12, 2013 at 6:32 AM
Kyaw Koko April 15, 2013 at 10:37 AM
​ငယ် ​လေး April 20, 2013 at 10:52 AM
​ကို​ညီ​နေ​မင်း​ရှင့် ....... mozilla firefox ​က ​မြန်​မာ​စာ​တွေ​ဖြစ်​သွား​လို့​ပါ serarch ​တွေ ​က​အ​စ ​ရှာ​ဖွေ​ခြင်း​ဆို​တာ​မျိုး ​အ​ကုန်​ပြောင်း​သွား​လို့​ပါ ​ပြီး​တော့​ဆို ​သတ်​ပုံ​တွေ​က​လည်း​မ​မှန်​ပါ​ဘူး​ရှင့် ​အဲ့​ဒါ ​သူ့​န​ဂို deafult ​တိုင်း​အ​င်္ဂ​လိပ် ​လို ​ပဲ ​ပြန်​ထား​ချင်​လို့​ဘယ်​လို​ပြန်​လုပ်​ရ​မ​လဲ​ဆို​တာ ​ကျေး​ဇူး​ပြု​ပြီး ​ပြော​ပြ​ပေး​စေ​လို​ပါ​တယ်​ရှင့်..
​ရင်​ထဲ​က ​ချစ်​ရ​သူ April 25, 2013 at 3:56 PM
​ရင်​ထဲ​က ​ချစ်​ရ​သူ April 25, 2013 at 3:58 PM
myawaddy May 11, 2013 at 7:52 AM
very thanks for that bro
Win Htway September 3, 2013 at 10:29 PM
Theinkha December 6, 2013 at 3:23 AM
​ကို​ညီ​နေ​မင်း​ခင်​ဗျာ ​ကျွန်​တော်​တ​ခု​လောက်​မေး​ချင်​လို့​ပါ.. ​ကျွန်​တော်​အ​ခု ​ဝင်း​ဒိုး၈​ကို ​သုံး​ပါ​တယ်.​ဂျီ​တော့၊​ဘေ​ဘီ​လုံ၊ ​ဗိုက်​ဗာ ​အား​လုံး​မှာ ​မြန်​မာ ​စာ​တွေ​က ​ဝင်း​ဒိုး​က​ပါ​တဲ့ ​စာ​တွေ​ပဲ​ပေါ်​နေ​တယ်..​ဇော်​ဂျီ​မ​ဟုတ်​ဘူး​ဗျာ..​ဖတ်​လို့​လဲ​မ​ရ​ဘူး..​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​မ​လဲ ​ကျေး​ဇူး​ပြု​ပြီး​လမ်း​ညွှန်​ပေး​ပါ​ဦး​ဗျာ..
thawng khai December 6, 2013 at 4:22 PM
G Talk ​တွေ Viber ​တွေ ​မ​ကူး​သတ်​ဘူး ​ဘယ်​လို​ကူး​နိင်​မ​လဲ
Myat Thein January 11, 2014 at 3:31 AM
I already made the three steps that u said but my mozila firefox doesn't work for myanmar font . How should I do? I can read but can't write. Pl let me know that.Thank u so much.
S' Pow Soe June 4, 2014 at 12:10 PM
Thank you very much for your providing of the Antivirus program. I use it now. It is going well.